မှစ. -ရန်ရန်းကျွန်းပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု, Kearney, အလျင်အမြန် NE
ဇိမ်ခံပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းက Grand ကျွန်း, Kearney, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးအလျင်အမြန် Nebraska လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 888-634-6151 Air လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်. သင်သည်အခြားသူချင်းခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေနဲ့အားစိုက်ရသော check-in လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများပြီးစီးလေဆိပ်မှာနာရီဖြုန်းဖို့သွားလျှင်ရန်းကျွန်း Nebraska အတွက်အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များအတွက်ဘွတ်ကင်ခန်း၏အချက်ဆိုတာဘာလဲ?
သငျသညျ sandhill ရိန်း၏နှစ်ပတ်လည်နွေဦးအချိန်ရွှေ့ပြောင်းသက်သေခံရန်သို့မဟုတ်အောက်တိုဘာလတွင်သဟဇာတချီတက်ပွဲ၏ရိတ်သိမ်းတွေ့ကြုံခံစားဖို့က Grand ကျွန်း Nebraska သွားရောက်ခြင်းအပေါ်အစီအစဉ်ရှိပါက, ပြီးနောက်သင်ကျော်လွန်ရန်းကျွန်း Nebraska အတွက်အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များကိုကြည့်နှင့်လက်ျာပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထုစင်းလုံးငှားရန်းကျွန်း Nebraska လေယာဉ်တစ်စင်းပျံသန်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီရှာဖွေတာကိုစဉ်းစားသင့်၏.
ဂျက်လေယာဉ်၏ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းခြင်းရွေးချယ်မှုဘို့သင့်ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်. space ကို, သက်သာခြင်း, ဇိမ်ခံ, ခံနိုင်ရည် --- သင်ကအမည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုအကောင်းဆုံးသင့်လျော်မယ့်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်မရရှိနိုင်စေမည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာပျံသင်မြေပြင်ကိုချွတ်ယူမီသင့်အားလပ်ရက်ပင်စတင်ပါလိမ့်မည်ဆိုလိုပါလိမ့်မယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းအားလုံးပုံမှန်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်တကွသင်ကူညီကြလိမ့်မည်. သင်သည်မည်သည့်ကိုပိုမိုစီတန်းနှင့်အတူအနှောက်အယှက်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်အလုအယက်စိုးရိမ်ရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်. ကိုယ့်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်မှတစ်ဆင့် Waltz, အတွက်သိုင်းကြိုး, နှင့်သင့်မိသားစုအားလပ်ရက် start ကန်ဖို့ကိုချွတ်ယူနိုင်ရန်လေယာဉ်မှူးကိုတောင်းဆို.
on-board ကိုဝန်ထမ်းများကပြင်ဆင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာများသို့ပင်သင်နှင့်သင့်မိသားစုတူးအဖြစ်ဇိမ်ခံအတွင်းပိုင်းခံစားကြည့်ပါ. အဲဒီအစားလေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီများကရေးဆွဲထူးထူးဆန်းဆန်းအချိန်ဇယားအပေါ်မှီခို၏, သင်နှင့်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့သည်သင်၏အားလပ်ရက်ပေါ်တွင်သင် join ရန်ဖိတ်ခေါ်အဘို့အသင်အရှိဆုံးအဆင်ပြေအချိန်တွင်သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိစေရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားကိုအပြီးသတ်နိုင်ပါတယ်.
ဇိမ်ခံနှင့်သက်သာခြင်းအမျိုးမျိုးယုဂျဖြစ်ခြင်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းနေသော်လည်း, သင်စင်းလုံးငှားလက်မှတ်ထိုးဖို့သည့်အခါငွေတန်ဖိုးကိုအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောစရာမလိုပေ. ရိုးရှင်းစွာအတတ်နိုင်ဗလာခြေထောက်လေယာဉ်ပျံအငှားဝန်ဆောင်မှုရန်းကျွန်း Nebraska န်ဆောင်မှုများငှားရမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှေးခယျြနှငျ့သငျအစဉ်အဆက်ကိုထပ်တခြားဘယ်သူ့ကိုမှစဉ်းစားဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်.
သငျသညျအတွက်ပျံသန်းနိုင်သည်အနီးဆုံးလေဆိပ် & ဂရန်းကျွန်းထဲက, Kearney, လငျြအမွ, ခန်းမ, ကြှဲ, အဒမ်, Madison နှင့် Platt ကောင်တီ, Nebraska http://flygrandisland.com/
ဂရန်းကျွန်း, Alda, Phillips က, Doniphan, ကိုင်ရို, စိန့် Libory, သစ်သားမြစ်, ချပ်မန်း, Giltner, Dannebrog, Trumbull, Boelus, aurora, Shelton, Marquette, စိန့်ပေါလ်, လေးသမား, လငျြအမွ, ပြည်တွင်းသို့, Juniata, Palmer က, Kenesaw, ဟားဗတ်, ဗဟိုစီးတီး, Farwell, Hampton, Ravenna, Rockville, မျောက်လွှဲကျော်, Hordville, Ashton က, Elba, Saronville, Heartwell, Glenvil, ရွှံ့စေးရေးစင်တာ, Bradshaw, Roseland, Polk, Henderson, Ayr, Holstein, Wolbach, Sutton, Clark, စွန့်စားခြင်း, ဖဲရ်ဖီးလ်က, Kearney, Pleasanton, ဖူလာ, ဘဲဂရိတ်, Loup စီးတီး, Grafton, Riverdale, အားလုံး, ဘင်နီဒစ်, Deweese, Greeley, York မြို့, Litchfield, စာရွက်များ, Stromsburg, mc Cool လမ်းဆုံ, အပြာရောင်တောင်တန်း, Edgar, Scotia, မြောက်အမေရိက Loup, Silver, အဘိဓါန် Creek, လောရင့်, အာရဇ်ပင် Rapids, Ong, ကမ့်ဘဲလ်, Fairmont, Amherst, Osceola, Shickley, Odessa, Axtell, Waco, ဂျီနီဗာ, ဂျီနိုအာ, Primrose, ကုန်းမြင့်, Miller က, funk, Davenp သို့မဟုတ် t, Gresham, Mason ဆိုစီးတီး, Arcadia, စိန့်အက်ဒွပ်, Exeter, နယ်လ်ဆင်, Elm Creek အဘိဓါန်, Spalding, ဝက်သစ်ကျပင်, Shelby, ထူးဆန်း, Hildreth, စကားလုံး, Inwale, ဥတီဂ်, Cordova, Carleton, Duncan က, မွန်ရိုး, Sumner, အနီရောင်တိမ်တိုက်, ရော့ခ်ဂီတကိုလမ်းညွှန်, Wilcox, Albion, အံ့သြစရာ, Ansley, Milligan, Beaver အဘိဓါန် Crossing, Bruning, Rising စီးတီး, Ohiowa, Ericson, Overton, Ruskin, မိတျဆှေ, Elyria, Goehner, Riverton, Holdrege, Ulysses, Staplehurst, Westerville, အကောင်းဆုံး, Ragan, Comstock, Franklin, Belvidere, Deshler, Platt ရေးစင်တာ, ကိုလံဘတ်စ်, Berwyn, Loomis, Bloomington, Tobias, Eddyville, Lindsay, Newman က Grove, Hardy, Seward, Bellwood, ပီတာစဘတ်, အတ္တလန်တာ, Dorchester, Byron, ဟေဗြုန်မြို့,, အာလေဇန္, Bartlett, ဘာထရန်, Naponee, Burr Oak, ဒါဝိဒ်သည်စီးတီး, Webber, Milford, Humphrey, အနောက်တိုင်း, ပျား, ရီပတ်ဘလီကန်စီးတီး, Lexington, Daykin, ဂိလဒ်ပြည်, Dwight, ကျိုးလေး, Sargent, Burwell, Alma, Oconto, Chester, ပန်းကုံး, Smithfield, သမတနိုင်ငံ, Brainard, ဟေရှဘုန်မြို့, လေဗနုန်တော, သာယာသော Dale, Creston, Swanton, Elgin, ကရေတေ, Orleans, Hubbell, Wilber, ဘရူနို, Courtland, Schuyler, အောက်စဖို့ဒ, Leigh, Madison, Abie, Reynolds, ပါးစပ်, Fairbury, Linwood, Tilden, Meadow ဟာ Grove, အက်ဒီဆင်, Plymouth, Merna, Narka, စစ်တိုက် Creek အဘိဓါန်, Belleville, တေလာ, သူမရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်, Mahaska, Stamford, Jansen, ရော်ဂျာ, Long Island တွင်, ကျူးဘား, Endicott, Howell, Norfolk, သံမဏိစီးတီး, Haddam, Beaver အဘိဓါန်စီးတီး, Anselmo, Stanton တို့, Diller, Morrowville, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာကြည့်ရန်, Hollenberg, Almena, ဘုရားဖူး, ဝါရှင်တန်, Brewster, Wisner
Private Jet Charter Flight From or To Lubbock, ငါ့ကိုအနီး TX Empty ခြေထောက်နဲ့လေယာဉ်